Chaung Tha Trip | The World of Pinkgold
လုပ်ချင်တာကတော့ တိုင်တင်းနစ်ပေါ့.. ဖြစ်နေတာက တစ်ယောက်တည်း.. လွမ်းလိုက်တာနော်
သူတော် on April 17, 2009 at 8:20 am said:
တနားစရာ ကောင်းလိုက်တာ တစ်ယောက်တည်း… ဟတ်ဟတ်…ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လေးတောင်တစ်ယောက်လောက်ခေါ်ပြီး မရိုက်ဘူး… 😛
zt on April 17, 2009 at 9:13 am said:
ကျွန်တော်တို့မှာတော့ သင်္ကြန်တွင်းလည်း ကွန်ပြူတာ ရှေ့ခေါင်းစိုက်ပြီး နေရတယ်။ သနားစရာ။
ဒါပေမယ့် အခုလို တခြားသူတွေ ပျော်နေပါးနေတာ မြင်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ 😀
မင်းယွန်း on April 17, 2009 at 11:05 am said:
ပင့်ဂိုးလ် ပိန်ပိန် ရေမစိမ်နဲ့ အီကြာကွေး.. အီကြာကွေူး.. 😛 ပေး… ဘယ်မလဲ ကင်မရာ…။
MrDBA on April 17, 2009 at 11:20 am said:
တော်တော်ပျောင်ခဲ့မှာ အဲလေ ပျော်ခဲ့မှာဘဲနော်။ ဒီမှာတော့ အလုပ် အလုပ် အလုပ် ….
Nga Myat San on April 17, 2009 at 12:14 pm said:
ပုတီးကတော့ သိကြားမင်း မဆင်းခင်ကတည်းက စွပ်ထားတာ–
မတော်လို့ ခွေးသာရေ ပုရပိုဒ်ထဲ ပါသွားမှဖြင့်—
strike on April 17, 2009 at 3:21 pm said:
သမီးရယ် သဲထဲမှာလိမ့်ပြီးလက်တွေထောင်ပြနေပါလား ဖြစ်ရတယ်လို့
ဝလုံးဝိုင်းဝိုင်း on April 18, 2009 at 4:13 am said:
ချောင်းသာ ခရီးလေး ဖတ်သွားပါတယ်။ ပုံတွေလဲ ကြည့်သွားတယ်။ မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာဆိုတော့ နောင် အဆင်ပြေရင် သွားမယ် စိတ်ကူးရင်း.. ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။ 😛
မနော်ဟရီ on April 20, 2009 at 9:00 am said:
ချောင်းသာက အရင်က ရေတော်တော်ကြည်ပါတယ်
ခုလို ကမ်းခြေတစ်ခုအဖြစ်လုပ်လိုက်မှ တော်တော်ကြီးကိုပျက်စီးသွားတာ
ksanchaung on April 20, 2009 at 3:09 pm said:
ငါးကင်နဲ့ ပုဇွန်ကင်စား၊ အုန်းရည်သောက်ပြီး ရေကူးရင်း မူးသတဲ့။ ဖတ်ရတာ လုံးဝမနိပ်ဘူး။
cuttiepinkgold on April 21, 2009 at 5:03 am said:
အယ် မူးလို့ မူးတယ် ပြောတာကို
strike on April 21, 2009 at 5:05 am said:
strike on April 21, 2009 at 5:06 am said:
cuttiepinkgold on April 21, 2009 at 5:09 am said:
အင်း တစ်ကယ်က ရေထဲဆင်းမလို့ပဲ strike ရဲ့.. မရောက်လိုက်နိုင်တော့ဘူး.. သဲထဲမှာတင် ဂိတ်ဆုံးသွားတယ် ကွိကွိ
strike on April 21, 2009 at 5:26 am said:
ဟ ဟ ဟ…:P
YE LWIN OO on April 23, 2009 at 9:50 am said:
a nice one, my friend… you have unique writing style… keep it up!!!
အိမ် on April 28, 2009 at 1:08 am said:
အိမ့်ချမ်းမြေ့ on April 28, 2009 at 3:18 am said:
ခွန်မြလှိုင် on April 28, 2009 at 5:04 am said:
အမက တခါမှ မြန်မာပြည်က ဘယ်ကမ်းခြေမှ မရောက်ဖူးလို့ .. ခုမှ အားရအောင် ကြည့်ရတယ်.. ပုံတွေ ထပ်တင်ပေးဦးနော်.. နယ်စည်းမခြားမှာလဲ တင်ပေးပါဦး ညီမရေ